Float ပြီးတော့အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် မှအကောင်းဆုံး Float ပြီးတော့အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwan, HUAI-AN HARDWARE CO., LTD. ပြီးပြည့်စုံစက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှု, အမှီအခိုကင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသန, စျေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည် Float ပြီးတော့အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအခြားရွေးချယ်စရာ application များအတွက်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ. ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ပုံစံ - DUCTILE IRON No. F22、F22F
DSC DUCTILE သံ float&နာတာရှည်ရေနွေးငွေ့ထောင်ချောက်
●DUCTILE သံခန္ဓာကိုယ်နှင့် CAP,
●MOP 20K 250 x̊ဂ.
●DSC F22 ရေငုပ်များကို INLET နှင့် OUTLET CONNECTIONS တွင်ပါဝင်သောခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်ပတ်စေခြင်းအားဖြင့် FIELD တွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။.
●INLET ဆက်သွယ်မှုသည်မှန်၏,ပိုက်လိုအပ်ချက်အဖြစ်လက်ဝဲနှင့်ထိပ်တန်း INLET.
●1/2&ကဗျာ;စာလုံးအိတ်နှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်ပြီးစစ်ဆေးရေးအဆို့ရှင်နှင့်လုံး ၀ မချိတ်ဆက်နိုင်သကဲ့သို့အသုံးပြုနိူင်သည်။,ဒီမှာတစ် ဦး တည်းဝင်ပေါက်နှစ်ခုနှင့်ထွက်ရှိနှစ်ခုရွေးချယ်မှု.
●CAP အပေါ်,OUTLET CASTING တွင်အလွန်အကျွံတိုက်စားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် CONDENSATE ပေါက်ကွဲမှုလျှော့ချခြင်းအတွက် OUTLET CHANNEL သို့ချိတ်ဆက်ထားသောပိုကြီးသောနေရာတစ်ခု.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.steamtraps.com.tw/my/float-and-thermostatic-steam-trap-2.html
အကောင်းဆုံး Float ပြီးတော့အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် Float ပြီးတော့အပူထိန်းကိရိယာ Steam ထောင်ချောက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်